What to do during Hawaii rental car shortage | Car Rental News
Home » Car mkpọsa News » Ihe ị ga-eme n'oge ụkọ ụgbọ ala Hawaii
Ihe ị ga-eme n'oge ụkọ ụgbọ ala Hawaii
Hawaii enweela ịrị elu ngwa ngwa na ndị ọbịa na-abịa n'oge Mee, nke a na-atụ anya na ọ ga-aga n'ihu n'oge ọnwa ọkọchị ma na-akpata ụkọ ụgbọ ala mgbazinye.
Ndị bi na ndị ọbịa na-enwe ihe ịma aka dị iche iche na ịnweta ụgbọ ala mgbazinye na gburugburu agwaetiti Hawaii.
Hawaii Tourism Authority na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala iji chọta ihe ngwọta.
Emeberela nlekọta kachasị site na ụlọ ọrụ mgbazinye kachasị ruo ọnwa Ọgọst.
Ndị bi na-enwe nsogbu ịchọta ụgbọ ala maka njem azụmahịa na oge ezumike gaa agwaetiti ndị agbata obi. Ndị ọbịa bịarutere na-enwe otu nsogbu na agwaetiti niile, gụnyere Oahu. Hawaii Tourism Authority (HTA) maara ọnọdụ a ma na-arụ ọrụ na ndị isi obodo na ndị ọchịchị, yana ụlọ ọrụ ụgbọ ala mgbazinye, na ngwọta dị mkpụmkpụ na ogologo oge.
Enweelarị ọtụtụ ụgbọ ala n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbazinye kachasị na August, yana ụgwọ mgbazinye kwa ụbọchị maka ụgbọ ala dịnụ na-adịkarị elu karịa na mbụ. Anyị anụwo akụkọ na-agbazite ụfọdụ ụgbọ ala ihe ruru $ 700 kwa ụbọchị.
Iigbọ ụgbọ ala ụgbọ ala nke Hawaii belatara ihe karịrị 40% n'oge ọrịa a na-efe efe, nke a kwere nghọta dị ka ịgagharị n'àgwàetiti ahụ kwụsịrị n'ụzọ zuru oke otu afọ. Ọ bụghị naanị na Hawaiian Islands mgbazinye ụgbọ ala; ọ na-emekwa na isi ezumike ebe mba.